GOLAHA WASIIRRADA S.R.R.C. IYO KALSOONIDA BAARLAMAANKA.
Taariikhda War-Isgaarsiinta: Waa barnaamij aad u xiisa badan oo taxane ah Guji
Goortii uu geeryooday Madaxweynihi Suuriya Xaafid Al-Asad ayaa taladii dalka lagu wareejiyey wiilkiisii Bashaar Al-Asad. Saxafi R/Suuriya ayaa maqaal uu qoray ku yiri
(Aniga oo yar ayaan darbiyada Dimashqi ku arki jiray qoraal weyn oo darbiga lagu dhajiyey, oo ay ku qorantahay Al-Asad Ilal-Abad, oo ah, Asad hajiro wiligii. Waan fahmi waayey waxa laga wado, anoo islahaa oo sow geeryoon-maayo, goortiise talada dalka loo dhiibay Bashaar Al-Asad ayaan gartay in laga waday R/Asad ayaa waligood talada dalka hayndoona).
Waa sidaasee, maalintii uu C/Laahi Yuusuf soo bandhigay barnaamijkii lagu dooranlahaa, ayaa madashii shirka laga qaybiyey buuggiisii tartanka madaxtinimada. Buuggaas oo ay dusha sare uga qorneyd ( Aragtida Soomaaliyada cusub) waxaa la'isweydiiyey macnaha dhabta ah ee loola jeedo Soomaaliyada cusub, sidoo kale, waa maxay aragtida ay wataan dadkan cusub ee Soomaaliya gacanta loo galin doono. Waxaanse hadalkii la fahmay galabkii lamagacaabay golihii Wasiiradda oo ay halkaas ka cadaatay in Soomaaliya ay u gacan gashay aragti cusub, lana-qoon-daynayo in la abuuro Soomaali cusub oo tii hore kaduwan masakax-ahaan iyo dhaqan-ahaan. Waxaana goobtaas ka soo baxday qodobadan soo socda.
1. In Itoobiya ay gacanta nagu dhigtay oo ay manta farxad iyo rayn-rayn u tahay. 15.Sano haday hortaag-neyd in Soomaaliya ay dowlad yeelato, waxay maanta gaartay halkii ay Soomaali karbtay, oo ah, iney dhisato dowlad ay iyadu hagto xubnaheeda.
2. Haddii looga adkaaday doorashadii Gudoomiyaha Barlamaanka, waxay ku dadaashay in khasaare danbe uusan ka soo gaarin jagooyinka soo haray. Waxay heshay Madaxwenihii ay rabtay. Waxay shardi ka dhigtay in R/Wasaaraha uu noqdo nin iyaga xiriir la leh. Sidoo kalana in golaha Wasiirrada ay u bataan raggii ay Soomaaliya ku lahayd.
3. Itoobiya waxay ku dadaashay in jaga kasta oo muhim ah u hesho nin iyaga toos ugu xiran, si hadhaw ay ugu sahlanaato markey doonto iney kala fur-furto.
4. Wasaaradda Gashaan-dhigga oo uu markii hore ku qornaa nin aan xiriir hoose lalahayn Itoobiya, waa laga tir-tiray oo waxay yiraahdeen, Waaba Wasaaradda kaliya ee aan Soomaali kala xaajoon doonnee, sidee loogu dhiibi karaa nimaan anaga na�ahayn.
5. Soomaalida badan-keedu waxay ogtahay in golihii Wasiirrada sidii markii hore loo qoray oo ay dadku badankiisu ku qanac-sanaayeen, in la bad-badalay saacadihii ugu danbeeyey, iyadoo loo dhisay si ay Itoobiya ku qanci karto, hadday rabto Soomaali haka gadoodee.
6. Warar hoose ayaan ku helnay, in Ragga qaar oo ay kamid yihiin Shaati-guduud. Barre Hiiraale. Cabdi Tarax ay ku sigteen in liis-kaba laga saaro. Waxaase laga furfuri waayey Madaxweynaha, iyadoo xal-dhexe looga dhigay in loo dhiibo Wasaarado aan lug ku lahayn xiriirka Itoobiya.
7. Golihii Samata-bixinta oo matalayey Siyaasadaha Itoobiya ka soo horjeeda, daadka ayaa la raaciyey, sida wax loo xulayana talo lagama-siin, odaya-doodiina waxaa loo dhiibay Wasaarado aan Siyaasadda xiriir lalahayn.
8. Dad badani wey filayeen in Itoobiya ay sidaan wax u maamuli doonto, waxaase lamoodayey in Madax-weynaha iyo R/Wasaarahuba ay fahmi karaan khatarta ay leedahay in la dhiso dowlad hal garab ah. Waxaana la sugayey iney dhisi doonaan dowlad isku dhaf ah, si-dunida iyo Soomaalidaba loogu qanciyo in la unkay dowlad midnimo qaran.
9. Wadanka ay dowladu haddeer qoxootiga ku joogto waxaa ka dhisan dowlad qaran oo axzaabta wadanka oo dhan laga qayb-galiyey, taasoo ay keentay markii Madaweynaha Kenya uu dareemay in shucuurtii shacabku kacsan-yahay ayuu is yiri, waa inaad dhistaa dowlad loo dhanyahay. Waxaa hadaba is-weydiin mudan. Madaxweyne C/Laahi Yuusuf iyo R/Wasaare Cali Geeddi miyey garan waayeen in dalka Soomaaliya uu ka mushkilad badan-yahay dalka Kenya.
Dhakhaatiirta waxaa lagu xantaa iney qalbi adagyihiin, oo aysan ka nixin waxyaaba badan oo ay dadka kale u nugul-yihiin. Haddiise wadanku khatar galo wey dhici kartaa iney jilcaan. Ka waran haddii uu ilmeeyey Dr Cali Baashi iyadoo laga waraysanayo Idaacadda Hornafrik. Waxaa ka muuqatay inuu arko dalkiisii oo haadaan ka sii dhacaya. Itoobiya oo hanatay madaxdii Soomaalida oo u tilmaameysa sida danteeda ay ku jirto, misana madaxdii Soomaalida ay yeelayaan taas.
Jen: Adan Gebyow wuxuu Eldoret soo hor-istaagay Soomaalida isagoo ilmeynaya ayuu yiri. Soomaaliyey waxa la idinla damacsan-yahay hadaad ogaan lahaydeen meesha aad maanta joogtaan ma�aydnan fadhideen.
Dowladan loo dhisay S.R.R.C.da ee laga fogeeyey qaybihii kale ee Soomaalida, haddii uu Barlamaanku aqbalo waxay iyaduna muujin-doontaa in Baarlaman-kana uu noqday mid ay hagaan kooxaha Itoobiya gacan-saarka laleh. Haddiise ay boorka iska jafaan, waxaa muuqan-doonta inuu yahay Baarlamaan Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliduna wuxuu hadda guuxoodu yahay dowlad Itoobiya hoosta kawado iney Soomaaliya ka caga-dhigato laguma-talagalin.
Isweydiintu waxay tahay Aragtida Soomaaliyada cusub maliqi-doonaan shacabku.
Maqaalkii Isniintii hore... Guji...
SomaliTalk.com | Nairobi, Kenya | Dec 6, 2004
Sheekh Cumar Faaruuq oo Bixiyey Waraysi Dhinacyo Badan Taabanaya
Waraysiga waxaa qaaday Siciid A. | K/Afrika